🥇 ▷ Fitbit Versa 2 ayaa la imanaya OLED, Alexa iyo Spotify shaashadaha oo ah 199 Euro ✅
Fitbit Versa 2 ayaa la imanaya OLED, Alexa iyo Spotify shaashadaha oo ah 199 Euro
Sannadkii hore Fitbit waxay soo saartay Fitbit Versa smartwatch taas oo u noqotay guul. Shirkaddu waxay hadda soo saartey hannaan jiil labaad oo loo yaqaan Fitbit Versa 2, iyadoo dhowr astaamood kor loogu qaaday kuwii ka horreeyay.
Fitbit Versa 2 imminka waxay isticmaashaa shaashad OLED oo aad ugafiican Versa LCD-ka oo jiilka hore jiri jiray. Aayadda 2 waxay sidoo kale la timid kaaliyaha codka codka ee Amazon Alexa waxayna isku daraysaa Spotify. Intaa waxaa sii dheer, smartwatch-ka wuxuu la imanayaa processor sare iyo nolol batari dheer.
Aayadda 2 ayaa sidoo kale xaq u leh daabacaad gaar ah oo kaliya ka duwan nooca guntin ee aad xirato. Versa 2 Edition gaarka ah waxay la imaanaysaa xarig dheeri ah oo polyester ah marka lagu daro suunka caadiga ah ee caagga ah. Dhammaan noocyada kaladuwanaanshaha waxay leeyihiin chassis aluminiin ah oo hadda leh NFC. Teknolojiyaddan ayaa ku biirtay Fitbit Pay oo hubinaysa taageerada lacag bixinta. Dharka caqliga leh ee caqli galka ahi wuxuu kaloo xaqiijinayaa la socodka wadnaha oo dhammaystiran Qalabka wuxuu leeyahay iska caabin biyo ah 50 mitir, taasoo macnaheedu yahay inaad ku isticmaali karto barkadda dhexdeeda adigoon walwal qabin.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale heleysaa shaqooyinka caadiga ah ee laga helo Versa, sida dhammaan orodka, baaskiil wadida, yoga iyo qaababka cusub ee la socodka hurdada.
Waxa kale oo jira hawl cusub oo hurdo hurdo, kaas oo bixiya soosaarid faahfaahsan oo ku saleysan garaaca wadnaha.
Xarka xiitaa wuxuu sidoo kale leeyahay shaashad had iyo jeer ah. Waa muhiim marka aad ubaahantahay inaad si dhakhso ah u eegto waqtiga, horumarka tababarka iyo nolosha batteriga. Cabbirka batteriga lama shaacin. Si kastaba ha noqotee, Fitbit wuxuu sheegayaa inay socon karto 5 maalmood oo hal kicitaan ah. Maalin dhan in kabadan awooda batteriga ee Versa. Dhinaca bidix ee aaladda ayaa ah badhanka xakamaynta oo shaqadiisa la diyaarin karo. Si kastaba ha noqotee, wax la waayayaa waa uun GPS ka samaysan aaladda. Tan macnaheedu waa inaan ku xirno taleefanka casriga ah si aan ula soconno dhaqdhaqaaqa inta lagu jiro jimicsiga.
Fitbit Versa 2 horey ayaa loo sii qorsheeyay waxayna ku garaaci doontaa dukaamada laga bilaabo Sebtember 15. Qiimaha, nooca caadiga ah wuxuu ku kacayaa 199 Euro halka daabacaada gaarka ahi gaadhay 229 Euros.
Fitbit ayaa sidoo kale ku dhawaaqday adeeg tababar cusub oo loo yaqaan Fitbit Premium. Diiwaangelinta adeeggu waa 10 Euro bishii ama 80 Yuuro sanadkii waxayna bixisaa qorshooyin gaar ah oo jimicsi, calorie qaadis iyo maareyn culeys.